California: Jaamacad la furay oo macallimiin la'aan wax dhigaysa - BBC News Somali
Image caption Brittany Bir ayaa sheegtay ardayda kaligood wax isbarta inay ku fiican yihiin inay shaqo abuurtaan
Jaamacad macallin la'aan ah ayaa laga furay California bishan.
Waxaa la yiraahdaa 42 - magacaas oo laga keenay macnaha nolosha, oo ka timid filimka taxanaha ee qayaaliga ee ( Hitchhiker's Guide to the Galaxy ).
Tani ayaa u eg qof indhaha la' oo hagaya indhoole kale, wayna adag tahay in la qiyaaso waaalidka imanaya maalinta ugu horaysa inay jeclaadaan jaamacad aan lahayn macallin.
Waxbarasho lacag la'aan ah
Jaamacada 42 ayaa waxaa aasaasay ninka Faransiiska ee maalqabeenka ee leh shirkadda teknoolajiyada ee Xavier Niel, oo taageeradiisa ay micnaheedu tahay in lagu dhigan karo jaamacada lacag la'aan, gurigana uu yahay lacag la'aan.
Image caption Ardayda dhigata 42 ayaa isla xalin doona wixii dhib ah waxbarashadooda, waxayna isku saxayaan borogoraamyada ay sameeyaan
Waxay isku dayayaan inay sameeyaan inay isku daraan "in wax la isla barto" iyo in la sameeyo barnaamij wax lagu baranayo. Labadooda ayaa ah hab ay jecel yihiin cilmi baarayaasha waxbarashada, laakiin habkan macallinka ayaa dusha kala soconaya.
Waxay dhameeyaan barnaamijka iyagoo isticmaalaya xog si lacag la'aan ah internetka looga heli karo iyo caawinaad ay ka helayaan ardayda kale.
Image caption Xavier Niel (midig) oo aasaasay jaamacada iyo duqa magaalada Paris iyo London
"Jawaaabta aan ka helnay shirkadaha in ardaydeenna ay yihiin kuwa mar walba raadsha xogta ay u baahan yihiin, inta ay waydiin lahaayeen madaxdooda waxa ay samayn lahaayeen," ayay sheegtay Brittany Bir oo ah madaxa howlgalka jaamacada 42 ee California oo ka soo baxday jaamacada qaybteeda Paris.
"Wax isla barashada ayaa horumarisa kalsoonida ardayda inay raadiyaan xal, badanaa si hal abuur ah oo aqli badan."
Ms Bir ayaa sheegtay in ardayda ka soo baxday 42 ay ku fiicnaan doonto la shaqaynta dadka, ka wadahadalka fikradahooda iyo difaacida - taasoo ah xirfad looga baahan yahay shaqada.
"Tani waa muhiim gaar ahaan dhinaca barnaamijyada kombuterka, taasoo dadka sameeya lagu yaqaano inaysan lahayn xirfad dad la dhaqmid," ayay sheegtay.
Image caption Waxaa badatay baahida dadka yaqaano borogoraamyada kombuterka taasoo keentay inay bataan meelaha lagu barto
"Sababta ugu wayn ee macallin loogu baahan yahay waxay tahay inuu ardayda ku hogaamiyo sidii ay uga gudbi lahaayeen waxyaabaha dhibka badan, macnaha badan, aadkana u adag oo awoodooda ka baxsan." ayuu dhahay.
Lahaanshaha sawirka Rick Friedman
Image caption Professor Dan Butin ayaa sheegay ardayda inay u baahan yihiin macallimiin fikradahooda kala dooda
"Macallimiinta fiican waxay awoodaan inay ardayda u horseedaan inay wax fahmaan.
Prof Butin, ayaa sheegay "macnaha guud ee jaamacada inay tahay in laga shaqaysiiyo waxyaabihii ay ardayda horay u yaqaaneen iyo sida ay u arkaan adduunka."
Sida Moocs, waxay bixisaa waxbarasho badan oo ardayda ay awoodaan oo ka duwan jaamacadaha caadiga. Laakiin waxay kaloo siisaa faa'iido bulsho oo ay dadkii ay dhismo isugu imanayaan iyo inay is dhexgalaan maalin walba.
Furitaanka jaamacada 42 ayaa timid markii ay bateen akadeemiyayaal lagu dhigo barnaamijka kombuterka ee dalka Maraykanka, oo bixiya koorsooyin gaaban oo ay qaataan kumanyaal arday oo doonaya inay ka faa'idaystaan baahida korortay ee loo qabo arday xirfadaha barnaamijyada kombutarada leh.
England: Ardayda dhaqaatiirta oo la kordhinayo 25%